Global Voices teny Malagasy » #GVMeetup Karachi: Mahita Fianakaviana Amin’ny Toerana Tsy Ampoizina · Global Voices teny Malagasy » Print
#GVMeetup Karachi: Mahita Fianakaviana Amin'ny Toerana Tsy Ampoizina
Voadika ny 17 Novambra 2013 22:06 GMT 1	 · Mpanoratra Ismail Vohra Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Mediam-bahoaka, Tanora, Ny Tetezana - The Bridge
Ismail Vohra (miakanjo ny akanjo nentim-paharazana shalwar kameez mijoro eo ankavia) miaraka amin'ny mpikambana eo amin'ny ekipan'ny Global Voices Pakistan toa an-dry Sana Saleem, Awab Alvi ary Faisal Kapadia mbamin'ny mpikambana hafa. Sary tao amin'ny rakitsary #GVMeetup ao amin'ny pejy Facebook Bolo Bhi. 1 Novambra 2013.
Ao anatin'ny enina herinandro manaraka izahay dia manomana fihaonana mivantana (‘meetups’)  notarihana sy nokarakarain'ny mpikambana ao amin'ny Global Voices, izay monina sy mahafantatra ireo vondro-piarahamonina any an-toerana any. Fijoroana vavolombelona nosoratan'i Ismail Vohra izay nanatrika ny fihaonana voalohany tao Karachi, Pakistan izy ity.
Nibaliaka miavaka ny masoandro tao Karachi tamin'ity zoma ity. Nasaina hanatrika fihaonan'ny Global Voices aho, ary nanantena fa karazana filazalazana mankaleo hafa, izay fanaon'ny ankamaroan'ny fikambanana maro, koa izy ity.
Nanao sonia hanatrika ilay fihaonana aho satria nanao izany ny namako. Hoy ny eritreritro hoe, “fotoana fanararaotra io hijerena azy ireo rehefa avy mianatra!”
Araka ny fotoana mahazatra ny Pakistani mifamotoana moa dia tonga teo an-toerana atsasakadiny taoriana aho. Gaga aho fa efa nanomboka ilay fihaonana. Niditra mangina tao an'efitra aho, raha nisy resadresaka TED  nalefa tamin'ny efijery goavana. Ny rangahy antsoina hoe ‘Ethan’ izay niresaka  momba ny voambolana anglisy hafahafa tsy tsaroako izay, saingy tsaroako kosa fa niresaka ny fomba ahafahantsika mikirakira ny aterineto hiampitana (tetezana) izao tontolo izao.
Araka ny mety hahafantaranao azo moa, mahaliana ihany ny resadresaka amin'ny TED , ary tahaka izany ity iray ity. Miainga amin'ny fanolorana amin'ny lahatsary mampisy aigam-panahy tahaka izao mihoatra noho ny amin'ny PowerPoint izay tsy vitan'ny hoe manome aingam-panahy ahy ny hevitr'i Ethan fa mampientanentana ahy ihany koa ny tian'ny olon'ny Global Voices atao manaraka. Rehefa tapitra ny lahatsary (video), Dia nanonatny iray iray tamin'ireo mpanolotra raha misy olona afaka manazava amin'ny mpanatrika izay tonga tara (ao anatin'izany ny tenako) izay nitranga atsasakadiny lasa izay.
Tonian'ny Global Voices amin'ny teny Urdu Faisal Kapadia efa vonona amin'ny fihaonana. Saripika avy amin'ny pejy Facebook Bolo Bhi.
Nisy mpanatrika iray nilazalaza ambangovangony mahafinaritra ny fomba hikirakirana ny aterineto amin'ny resaka fikatrohana. Tonga avy eo ny fotoana nahavariana ahy indrindra. Nanontany ny mpanolotra iray, “Fantatrareo ve fa nisy ny diabe 700 kilaometatra omaly ho an'ireo olona nanjavona tao Balochistan [mg] [faritany]?” dia nisaina aho hoe, “Oadray! Oah. Fa nahoana aho no tsy namaky izany tamin'ny tranonkalan'ny BBC na nahita izany tao amin'ny [fantsom-baovao lohalaharana ao Pakistan] Geo News?”
Nanohy izy: “Ary inona moa ny ataon'ny Global Voices. Miezaka izahay ny hanandratra ireo feo tsy mba lazain'ny gazety be mpanaraka.”
Ary tsy nanao afa-tsy ny nanaiky aho. Matoky aho hoe manontany tena avokoa iranareo hoe inona moa no tena niavaka tao amin'ity fihaonana ity? Tsy manankevitra aho. Ny hany fantatro dia tsy nahatsiaro ho notiavina sy nomena anjara toerana manokana toy izany aho hatramin'ny nisiana fihaonana tahaka izany. Nahatsapa aho hoe ao anatin'ity fianakaviana ity. Tahaka ny hoe noforonina ho azy ireo manokana aho. Feno fanetre-tena,manaja olona ary mahafinaritra tokoa ry zareo. Tsy fantatro na nihinana siramamy tahaka ny ahoana na vatomamy malefaka tahaka ny inona no lanin-dry zareo tamin'io andro io. Saingy na nanao ahoana na nanao ahoana, nisy fifandraisana am-po sy hafanana tao amin'ny rivotra iainana. Nandresy lahatra ahy ny olona manana fihetsika feno fanetre-tena tahaka itony, na ny marina kokoa, nahatonga ahy hahatsapa fa te-ho anisan'ity fianakaviambe manerantany ity avy hatrany aho.
Tanora mpianatra nanatrika fanolorana nandritra ny fihaonana. Sary avy ao amin'ny pejy Facebook Bolo Bhi.
Mety hampipoitra feo voaafina avy amin'ny vazan-tany efatra any ny Global Voices, saingy ity kosa feo avy any anatiny any. Fianakaviana iray azo itokisana. Nampianatra ahy ny tao fa tsy mila avo na be feo aho raha te-hahazo mpihaino, fa mamorona fitiavana sy fifandraisana am-po izay mety ho tsapan'ny olona sy azony. Nanokatra ahy haniry (izao) tontolo (izao) tsara kokoa ny tao. Nandrisika ahy hiasa am-pitiavana ity firenena ity sy hanao valim-babena.
Eny, indraindray tsy voazava tsara ao amin'ny teny ny fahatsapana. Tsy hanao dokambarotra (hampiroborobo) ny Global Voices no ataoko eto, saingy eny, nisy zavatra nanome aingam-panahy ahy tao ary mitady ny andro hahombiazan'izy ireo aho amin'ny iraka tanterahiny ary dia hiteny afaka hirehareha fa tena faly tokoa fa nanatrika ny fihaonana “ofisialy” voalohany indrindra notontosain-dry zareo.
Miverimberina matetika ao amin'ny tranonkala ao i Ismail Vohra 17 taona mikaroka fitantarana tsy mitongilana. Mavitrika amin'ny fikarakaram-piarahamonina ao Karachi, izay hamenoany ny dingana O ao an-tsekolin'ny tanàna izy, sampana PAF, izay maha-lohalaharana azy. Liana tokoa amin'ny poezia amin'ny teny Urdu izy ary mavitrika amin'ny adi-hevitra amin'ny teny Urdu. Ismail dia anisan'ireo tafiditra tamin'ny fifanakalozana mpianatra Kerry-Lugar 2012-2013 nankany Etazonia. Araho izy ao amin'ny Twitter @ismail_vohra 
Isaorana tokoa ny fikmbanana politika sy mpiaro ny zo ao amin'ny Bolo Bhi tamin'ny nanomezany ny toerana hanatontosana ny fihaonana, sy ny tonian'ny GV Urdu Faisal Kapadia mbamin'ny mpanoratra GV Pakistan Sana Saleem , tamin'ny fanomanana ny fihaonana, niaraka tamin'i Eddie Avila sy ny ekipan'ny Rising Voices . Ny fihaonana manaraka moa dia notontosaina tao Cairo tamin'ny 16 Novambra. 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/11/18/54249/
 fihaonana mivantana (‘meetups’): https://globalvoicesonline.org/2013/10/31/meetup-with-global-voices/
 resadresaka TED: http://www.ted.com/talks/ethan_zuckerman.html
 diabe 700 kilaometatra omaly ho an'ireo olona nanjavona tao Balochistan [mg] : https://mg.globalvoicesonline.org/2013/11/06/53823/
 Faisal Kapadia : https://globalvoicesonline.org/author/faisal-kapadia/
 Eddie Avila : https://globalvoicesonline.org/author/eduardo-avila/
 Cairo tamin'ny 16 Novambra. : https://globalvoicesonline.org/2013/11/12/global-voices-meetup-in-cairo-egypt/